အစိုးရအတွက် option နှစ်ခု | AAS Burmese
by အောငျအောငျ May 2, 2018 950 views
ဓါတ်ပုံ - စိုးမင်းထိုက်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ UNSC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က မြန်မာခရီးစဉ်အပြီး သတင်းစာရှင်လင်းပွဲမှာ မြန်မာအစိုးရအတွက် ရွေးစရာ option နှစ်ခု ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ဂျီနိုဆိုဒ် တရားခံများကို ICC ကနေ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖမ်းရမလား?
ဒါမှမဟုတ် ၊ အစိုးရကိုယ်တိုက် ဖမ်းပြီး ပို့ပေးမလား?” လို့ ဗြိတိသျှ သံအမတ်က သံတမန်စကားအသုံးအနှုံးနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တယ်။ ဒီအသုံးအနှုံးတွေကို “စီစစ်ရေးကဒ်ပြားကိုင်ပြီး နိုင်ငံသားကဒ်ကိုင်ထားတယ် လို့ ယုံကြည်လက်ခံထားသူတွေ ဘယ် နားလည်မလဲ။ မြန်မာစာတောင် နားမလည်တဲ့သူတွေ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ သံတမန်စကား ကို ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ။
“တပ်မတော်က လိင်အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်မရှိ။ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ အသင့်ပါ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်ရင် အရေးယူမယ်။ ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်တွေကြောင့် ပြသနာဖြစ်ခဲ့တာပါ။” လို့ ဗြောင်လိမ် ဗြောင်ငြင်း ဗြောင်လှည့်စားလိုစိတ်နဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေကို မျက်မြင်သက်သေတွေ တွေ့ထားတဲ့ သံတမန်တွေ ဘယ်နားထောင်ချင်ပါ့ မလဲ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျဘက် အသက်လုထွက်ပြေးသွားတဲ့ ကုလားမတွေ ငိုယိုပြောလို့ သူတို့သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ ငါတို့ပြောတာ နားမထောင်ဘူးလို့ ပြောခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အောက်တန်းကျသလဲ တွေးမိရဲ့လား။ ကချင်မ တွေလဲ သရုပ်ဆောင်နေတာပဲလား။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မီးရှို့သတ်ဖြတ် မုဒိန်းကျင့် ဂျီနိုဆိုဒ်လုပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး။ လိင်အကြမ်းမဖက်ဘူး။ ထွက်ပြေးတဲ့အရေအတွက်က အဲလောက်မများဘူးလို့ ငြင်းနေရုံနဲ့ ICC အမှုကို မရှောင်လွဲနိုင်ဘူးဆိုတာ မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် လူတိုင်းသိပါလျက် ဆက်လက် ငြင်းဆန်နေခြင်းဟာ တရားခံတွေ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ အသုံးအနှုံးပဲဖြစ်တယ်။
ဘယ်ရာဇဝတ်ကောင်က “ငါ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်”လို့ ဝန်ခံဘူးသလဲ။ သူတို့က သေတဲ့အထိငြင်းမှာပဲ။ မရှိဘူး မလုပ်ဘူး လို့ ငြင်းသူတွေအဖို့ သက်သေပြစရာမလို။ ” ရိုဟင်ဂျာရှိတယ်။ သူတို့ကို ဂျီနိုဆိုဒ် လုပ်ရလွယ်အောင် ဘင်္ဂလီ လို့ ခေါ်နေတာ” လို့ ပြောနေသူတွေက ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ပြတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဘ တရုတ်တောင်လက်ခံရတယ်။ ဘယ်ငြင်းနိုင်မလဲ။
တရားသူကြီးက အထောက်အထားတွေ စုံစုံလင်လင် ရထားပါလျက် တရားခံက ဆက်ငြင်းနေခြင်းဟာ သူပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို တရားသူကြီးသိနေတော့ တရားခံကို “မင်းယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဝန်ခံမလား။ ဒါမှမဟုတ် ရာဇဝတ်ကောင်ကို ဒရွတ်ဆွဲခေါ်ရမလား” လို့ ဗြိတိန်သံအမတ်က သံတမန်စကားနဲ့ ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘင်္ဂလီတွေ လို့ ပြောဆိုရေးသားသူမှန်သမျှ ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းက ဘင်္ဂလီ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံတွေရဲ့ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်ရေးအစီအစဉ် အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီ။ မကြာခင် ရိုဟင်ဂျာကို ဘင်္ဂလီလို့ ရေးတဲ့ မီဒီယာတွေအတွက်လဲ ဝရန်းစာ ရောက်လာလိမ့်မယ်။
အစိုးရအတှကျ option နှဈခု
မွနျမာနိုငျငံသို့ရောကျရှိခဲ့တဲ့ UNSC ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့က မွနျမာခရီးစဉျအပွီး သတငျးစာရှငျလငျးပှဲမှာ မွနျမာအစိုးရအတှကျ ရှေးစရာ option နှဈခု ပေးခဲ့ပါတယျ။
“ဂြီနိုဆိုဒျ တရားခံမြားကို ICC ကနေ ဖမျးဝရမျးထုတျပွီး ဖမျးရမလား?
ဒါမှမဟုတျ ၊ အစိုးရကိုယျတိုကျ ဖမျးပွီး ပို့ပေးမလား?” လို့ ဗွိတိသြှ သံအမတျက သံတမနျစကားအသုံးအနှုံးနဲ့ ပွောဆိုခဲ့တယျ။ ဒီအသုံးအနှုံးတှကေို “စီစဈရေးကဒျပွားကိုငျပွီး နိုငျငံသားကဒျကိုငျထားတယျ လို့ ယုံကွညျလကျခံထားသူတှေ ဘယျ နားလညျမလဲ။ မွနျမာစာတောငျ နားမလညျတဲ့သူတှေ အင်ျဂလိပျလိုပွောတဲ့ သံတမနျစကား ကို ဘယျနားလညျပါ့မလဲ။
“တပျမတျောက လိငျအကွမျးဖကျခဲ့တဲ့ ရာဇဝငျမရှိ။ ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျချေါဖို့ အသငျ့ပါ။ ပွဈမှုကြူးလှနျကွောငျး အထောကျအထားပွနိုငျရငျ အရေးယူမယျ။ ARSA ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျတှကွေောငျ့ ပွသနာဖွဈခဲ့တာပါ။” လို့ ဗွောငျလိမျ ဗွောငျငွငျး ဗွောငျလှညျ့စားလိုစိတျနဲ့ ပွောတဲ့စကားတှကေို မကျြမွငျသကျသတှေေ တှထေ့ားတဲ့ သံတမနျတှေ ဘယျနားထောငျခငျြပါ့ မလဲ။
ဘင်ျဂလားဒခြေျ့ဘကျ အသကျလုထှကျပွေးသှားတဲ့ ကုလားမတှေ ငိုယိုပွောလို့ သူတို့သရုပျဆောငျကောငျးလို့ ငါတို့ပွောတာ နားမထောငျဘူးလို့ ပွောခွငျးဟာ ဘယျလောကျအောကျတနျးကသြလဲ တှေးမိရဲ့လား။ ကခငျြမ တှလေဲ သရုပျဆောငျနတောပဲလား။
ရိုဟငျဂြာတှကေို မီးရှို့သတျဖွတျ မုဒိနျးကငျြ့ ဂြီနိုဆိုဒျလုပျပွီး ရိုဟငျဂြာ မရှိဘူး။ လိငျအကွမျးမဖကျဘူး။ ထှကျပွေးတဲ့အရအေတှကျက အဲလောကျမမြားဘူးလို့ ငွငျးနရေုံနဲ့ ICC အမှုကို မရှောငျလှဲနိုငျဘူးဆိုတာ မငျးအောငျလှိုငျ နဲ့ အောငျဆနျးစုကွညျအပါအဝငျ လူတိုငျးသိပါလကျြ ဆကျလကျ ငွငျးဆနျနခွေငျးဟာ တရားခံတှေ ပွောလပွေ့ောထရှိတဲ့ အသုံးအနှုံးပဲဖွဈတယျ။
ဘယျရာဇဝတျကောငျက “ငါ ပွဈမှုကြူးလှနျတယျ”လို့ ဝနျခံဘူးသလဲ။ သူတို့က သတေဲ့အထိငွငျးမှာပဲ။ မရှိဘူး မလုပျဘူး လို့ ငွငျးသူတှအေဖို့ သကျသပွေစရာမလို။ ” ရိုဟငျဂြာရှိတယျ။ သူတို့ကို ဂြီနိုဆိုဒျ လုပျရလှယျအောငျ ဘင်ျဂလီ လို့ ချေါနတော” လို့ ပွောနသေူတှကေ ခိုငျလုံတဲ့ သကျသအေထောကျအထား ပွတော့ စဈအာဏာရှငျတှရေဲ့ အဘ တရုတျတောငျလကျခံရတယျ။ ဘယျငွငျးနိုငျမလဲ။
တရားသူကွီးက အထောကျအထားတှေ စုံစုံလငျလငျ ရထားပါလကျြ တရားခံက ဆကျငွငျးနခွေငျးဟာ သူပွဈမှုကြူးလှနျလို့ပဲ ဖွဈတယျ။ ဒါကို တရားသူကွီးသိနတေော့ တရားခံကို “မငျးယဉျယဉျကြေးကြေး ဝနျခံမလား။ ဒါမှမဟုတျ ရာဇဝတျကောငျကို ဒရှတျဆှဲချေါရမလား” လို့ ဗွိတိနျသံအမတျက သံတမနျစကားနဲ့ ပွောခဲ့တာဖွဈတယျ။
ရိုဟငျဂြာတှကေို ဘင်ျဂလီတှေ လို့ ပွောဆိုရေးသားသူမှနျသမြှ ဂြီနိုဆိုဒျတရားခံတှဖွေဈတယျ။ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝနျးက ဘင်ျဂလီ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို ဂြီနိုဆိုဒျတရားခံတှရေဲ့ လူမြိုးတုံးသုတျသငျရေးအစီအစဉျ အဖွဈ မှတျတမျးတငျခဲ့ပွီ။ မကွာခငျ ရိုဟငျဂြာကို ဘင်ျဂလီလို့ ရေးတဲ့ မီဒီယာတှအေတှကျလဲ ဝရနျးစာ ရောကျလာလိမျ့မယျ။
မူရင်း – https://www.voanews.com/east-asia-pacific/analysts-un-security-council-myanmar-visit-one-small-step
ရိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအဖြစ် အဦးဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံရသူများ
ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ် နှင့် သူမကဲ့သို့ အသိတရားခေါင်းပါးသော ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်များ